Wararkii ugu dambeeyey xiisadda Masar iyo Ethiopia ee Nile – Radio Damal
Wararkii ugu dambeeyey xiisadda Masar iyo Ethiopia ee Nile
Masar, Ethiopia iyo Sudan ayaa ku guul-darreystay inay heshiis ku gaaraan wareeggii ugu dambeeyey ee wadahadalladii uu marti-geliyey ururka Midowga Afrika ee la doonayey in xeer loogu sameeyo qulqulka biyaha webiga Nile ee biyo-xireenka ay dhistay Ethiopia, sida ay sheegeen saddexda dal.
Midowga Afrika ayaa laba toddobaad ka hor billaabay dadaallada dhex-dhexaadinta laba, waxaana ay ku saabsanaayeen heerka biyaha ay Ethiopia ku buuxin karto biyo-xireenka.
Biyo-xireenka ayaa xudun u ah qorshe ay Ethiopia dooneyso inay ku noqoto dalka ugu weyn ee Afrika ee dhoofiya korontada, hase yeeshee waxa uu walaac ku abuuray Masar oo inta badan dadkeeda gaaraya 100-ka milyan ay ku tiirsan yihiin biyaha webiga Nile.
“Dalabyo aan weli isbedelin oo xad dhaaf ah oo ay sameynayaan Masar iyo Sudan ayaa hor-istaagay in wareeggan wadahadallada uu heshiis ku dhammaado,” waxaa sidaab bayaan ku yiri Wasaaradda Biyaha, Waraabka iyo Tamarta Ethiopia.
Wasaaradda Waraabka ee Masar ayaa Isniintii sheegtay in saddexda dalba ay warbixintooda wadahdallad au gudbin doonaan dhex-dhexaadiyaha oo ah madaxweynaha Koonfur Afrika iyo Midowga Afrika Cyril Ramaphosa.
“Hadafka la damacsan mar walba waa in heshiis in la gaaro, waana waxa aan isku dayeyno,” waxaa sidaas yiri wasiirka arrimaha dibedda Masar Sameh Shoukry, oo la hadlay taleefishin dalkaas ku yaalla.
Wasiirka Warfaafinta Sudan, Faisal Saleh ayaa Isniintii sheegay in arrintan ay qasab tahay in wadahadal lagu xalliyo, islamarkaana xal dhex-dhexaad ah uu lagama maarmaan u yahay in la xadido saameyn taban oo uu yeesho biyo-xireenka.